Lapho siseyizitha esikoleni esiphakeme, avame wazibona izithombe yencwadi ngomlando eGrisi lasendulo. Ngandlela-thile, Ancient Greece yethulwa ngokucace kakhulu - kwakukhona nemifanekiso eminingi izithombe nje izithombe zokuphila kwansuku zonke isikhathi eside-gone. Mhlawumbe kwakungenxa inkathi yokuchuma esintwini ngokuya amasiko nezenhlalo. Manje, ngemva kweminyaka eminingi, uyaqaphela ukuthi kulesi sikhathi imbali imidwebo, ebaziwe fashion. Indlela esinesithunzi futhi kwezobuciko sizobukeka AmaGreki asendulo e amajazi abo wesifazane njengoba enhle ebukekayo YesiGreki peplos. Peplos - eside ngaphambi lo mhlaba besifazane izingubo ijwabu ichopho ngesimo isikwele. It is hhayi ithungwe, futhi ngobuciko nolwelwe ezihlukahlukene. Ikhono bazisonga ngalezi enhle izingubo zabo ngesikhathi kwaba isihloko cwaningo. Ngenxa lula zangaphandle nokukarisa emphethweni ukwehla yamaGreki asendulo ngubo owawufana amakholomu amathempeli. On the izinkintsho emahlombe abopha uhlangothi ingubo nezandla sowesifazane ihlale ivuliwe. Mahhala, ukhululekile, ngendwangu elithambile - izingubo ezifana kwaba yisisekelo isitayela ngesiGreki. Lesi sitayela yayidumile endulo, wahlala ethandwa ngisho kwamanje.
Kusihlwa igqoka isitayela ngesiGreki, ukudala umfanekiso unkulunkulukazi. Bayakwazi ukufihla eliphakeme nakakhulu futhi zibukeke ukudala lesifanele sibalo ezilinganiselwe. Lesi sitayela omangalisayo esifanelana iyiphi intombazane, kungakhathaliseki ukuthi hlobo sibalo. Lesi sitayela ingenye izitayela ezidumile kakhulu phakathi kwabesifazane. Lokhu kungenxa yokuthi ingubo ende zibukeke yinde sibalo ulunika ngokuvumelana nobukhulu. A neckline ugcizelela kusizakale amabele zabesifazane. Mahhala zohlobo fihla inkinga ezindaweni nebhande ngaphansi ngokudayisa okhalweni umugqa uyokwenza sibalo njengabesifazane xaxa.
Ngokuhamba nomlando wayo, ukuthuthukiswa LamaGreki kusihlwa igqoka iye yashintshwa okukhulu. Abaklami Modern udale izithombe ezintsha, ukungeza noma ukushintsha izingubo ezivamile. Shintsha umbala shades izingubo ngesiGreki wesimanje. Manje zonke Abaklami ukunikela yombala. Yiqiniso, buye bashintsha, futhi izinto ngokwabo. Ukuthuthukiswa chemical textile izimboni eziye zaholela ekubeni ubone ukuvela izinto ezintsha mncane nge umbala esiqinile. Rayon, ukotini, satin, chiffon, satin - lokhu akulona uhlu oluphelele izinto, okuyinto ithungwe kusukela igqoka ngesiGreki. kakhulu Isitayela uye washintsha ezinye, futhi. Kwezinye onobuhle lapho imikhono, kweminye imihlobo eyodwa noma ezimbili Britel, futhi amanye aze ngisho ne emahlombe evulekile. Low-cut zokugqoka ezihlukahlukene kakhulu - V emise, yisikwele, indilinga, inhliziyo. I bodice isiqedile ubuhlalu, rhinestones, sequins, Swarovski amatshe kanye nezinye imihlobiso. Ngu phansi ingubo ngokuvamile ithungwe frill ezifincizekile ezifana nezimpiko. Ngezinye izikhathi ingubo ithungwe izingqimba ezimbili noma ezintathu lendwangu, ungqimba ngamunye ngaleso isiketi umphetho emifushane kunamanye. It kuvela isiketi enhle kakhulu, isitayela sabasincane lihlotshiswe sibalo. It kuvela ukuthi inkulumo ethi "kusihlwa izingubo isitayela YesiGreki" ngokuthi yonke indawo zokukhiqiza ingubo nge bendabuko drapery izindwangu kanye nomklamo zanamuhla uthola.
Ngo-inthanethi esitolo sethu siveza inani elikhulu izingubo oluxube isitayela ngesiGreki. Lokhu okuthiwa isitayela ukuthi "iNkosazana." Kuyinto inhlanganisela izitayela ezimbili - esiGrekini nama-A umugqa. Kusukela isitayela ngesiGreki ngofuzo ukukhanya kanye Airy ngalé overestimated okhalweni, ibhande ngaphansi ngokudayisa futhi zihlobise emphethweni ithambe umphetho. Futhi kusukela A-line kuthathwe lwavutha phansi cut izingubo. Umphumela waba imodeli okumangalisayo - a ngomusa, njengabesifazane kanye ebukekayo. Le dress kufanelekile cishe zonke sibalo. Made of a, izindwangu elikhanyayo ukukhanya ehlotshiswe rhinestones futhi sequins - lokhu ingubo ngeke kuhlobisa ikhabethe yimuphi wesifazane. It kungenziwa igqoke ephathini friendly, ezinkampani zemikhosi futhi ukugujwa olusemthethweni. Ubude igqoka ezisukela iqakala kuya phansi. Kusihlwa igqoka phansi manje ethandwa kakhulu, nakuba eminyakeni embalwa kwaba obuphelele imfashini kwedolo.
Kwethulwa ku-intanethi esitolo onobuhle ziqondiswa ezibhekiswe entsheni, futhi amanani ke ongaphakeme. Inani iqala ruble 1500 ngoba ingubo, isilinganiso eside kusihlwa dress kuwufanele ruble 3,000. Eshibhile kusihlwa igqoka ethulwa cishe 80 models. Uma ungafuni ukuthenga ingubo, ungase futhi uthathe sokuqasha kusihlwa dress.
Sikumema ukuba shí emkhathini of fashion nobuhle, ukuthola izingubo zazo ngesiGreki, ingubo lapho uyobheka umbukwane futhi ebukekayo. Phela, emoyeni indwangu mncane, ezinemibala egqamile te, elithambile bazisonga ngalezi esilazayo kuzodala isithombe yasezulwini unkulunkulukazi, futhi uzoba ukuzizwa enchanting futhi ngokubabazekayo ngesikhathi esifanayo!
Izikhwama "UMarku Dzheykobs" - isibonelo sokuba ozinikezele kweqiniso
Umlingisi Mikhail Zhigalov: Biography
Ubisi yokungezwani komzimba e abadala: Izimpawu kanye Ukwelashwa. Komzimba imikhiqizo yobisi
Njengoba amangqamuzana ezinzwa e nokwakheka kwawo
"Russobalt" imoto: umlando umkhiqizo futhi imodeli yefoni. Izimoto "Russo-Balt": Ukucaciswa, izibuyekezo abanikazi